ပြည်သူတွေ ဘက်မှ ရပ်တည် ခဲ့တာကြောင့် ပိုင်ဆိုင်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ ကို နိုင်ငံတော် ပိုင် အဖြစ် ချိတ် ပိတ်သိမ်းဆည်း သွားခံရဖွယ် ရှိနေတဲ့ ခိုင်သင်း ကြည် တို့မိသားစု – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ပြည်သူတွေ ဘက်မှ ရပ်တည် ခဲ့တာကြောင့် ပိုင်ဆိုင်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ ကို နိုင်ငံတော် ပိုင် အဖြစ် ချိတ် ပိတ်သိမ်းဆည်း သွားခံရဖွယ် ရှိနေတဲ့ ခိုင်သင်း ကြည် တို့မိသားစု
ပြည်သူတွေ ဘက်မှ ရပ်တည် ခဲ့တာကြောင့် ပိုင်ဆိုင်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ ကို နိုင်ငံတော် ပိုင် အဖြစ် ချိတ် ပိတ်သိမ်းဆည်း သွားခံရဖွယ် ရှိနေတဲ့ ခိုင်သင်း ကြည် တို့မိသားစု
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ခိုင်သင်းကြည်ကိုတော့ အားလုံးသိကြမယ် ထင် ပါတယ်နော်။ ဒီနေ့ဒီချိန်အထိ အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာ အောင်မြင်မှုတွေ ရပ်တည်နေခဲ့ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပါ ပိုင်ဆိုင် နေတဲ့ မင်းသမီး တစ်လက်ပါပဲနော်။ မင်းသမီးတစ်ယောက် အနေနဲ့ အေး ဆေးနေနိုင်ပေမယ့်လည်း ဓမ္မနဲ့ အဓမ္မကြားမှာ ဓမ္မဘက်ကနေ အခိုင်အမာ ရပ်တည်ခဲ့သူပါပဲနော်။
သူမရဲ့ ဖခင်မှာ စစ်တပ်မှ အရာရှိ အငြိမ်းစားတစ်ဦး ဖြစ်ပေမယ့်လည်း နွေဦးတော် လှန်ရေးမှာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူပါဝင်ခဲ့တာကြောင့် ဥပ ဒေ အရ အရေးယူခံရဖွယ် ရှိနေတဲ့အပြင် သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကိုပါ နိုင်ငံတော်ပိုင်အဖြစ် သိမ်းဆည်းခံရဖွယ် ရှိနေတယ် လို့ လူမှုကွန်ယက် တွင် သတင်းတွေ ပျံ့နှံ့နေတာပါနော်။ ” ဘယ်လိုတွေတောင်လဲဟယ်! ယုတ်မာလိုက်ကြတာ..👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽သရုပ်ဆောင် ခိုင်သင်းကြည် ….ခိုင်သင်းကြည်၏ …. အမျိုးသား …. ခန့်နိုင် ….ခိုင်သင်းကြည်၏ ….သမီး ဖြစ် သူ ….. စံထိပ်ထားဦး …..၎င်းတို့ ၃ ဦးသည် …. CDM ပြုလုပ်ရန် ….လှုံ့ဆော်ခြင်း …. CRPH အားထောက်ခံခြင်း ….ဆူပူ+အုံကြွ+ မှု များဖြ စ်ရန် ….အ+ကြမ်း+ဖက်တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ရန် …. လှုံဆော်ခြင်း … နိုင်ငံတော် ….
အကြီးအကဲများအား …. စော်ကား …..ပုတ်ခတ်ခြင်း ….. တို့ကြောင့် …..၎င်း တို့ ၃ ဦးအား …. ဥပဒေအရ ….ထိရောက်စွာ …. အရေးယူသွား မည် …..ယင်းအပြင် …. မိသားစုပိုင် …. စီးပွားရေး … လုပ်ငန်းများအား ….နိုင်ငံတော်ပိုင်အဖြစ် …. ချိတ်ပိတ် ….သိမ်းဆည်း …. သွားမည် … . ” လို့ Facebook ပေါ်တွင် ရေးသားတာမြင်တွေ့နေရပေမယ့် အတည်ပြုလို့တော့ မရသေးပါဘူး ပရိသတ်ကြီးရေ….
ပရိသတ္ႀကီးေရ သ႐ုပ္ေဆာင္ ခိုင္သင္းၾကည္ကိုေတာ့ အားလုံးသိၾကမယ္ ထင္ ပါတယ္ေနာ္။ ဒီေန႔ဒီခ်ိန္အထိ အႏုပညာလမ္းေၾကာင္းမွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရပ္တည္ေနခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြပါ ပိုင္ဆိုင္ ေနတဲ့ မင္းသမီး တစ္လက္ပါပဲေနာ္။ မင္းသမီးတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ေအး ေဆးေနႏိုင္ေပမယ့္လည္း ဓမၼနဲ႔ အဓမၼၾကားမွာ ဓမၼဘက္ကေန အခိုင္အမာ ရပ္တည္ခဲ့သူပါပဲေနာ္။
သူမရဲ႕ ဖခင္မွာ စစ္တပ္မွ အရာရွိ အၿငိမ္းစားတစ္ဦး ျဖစ္ေပမယ့္လည္း ေႏြဦးေတာ္ လွန္ေရးမွာ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူပါဝင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဥပ ေဒ အရ အေရးယူခံရဖြယ္ ရွိေနတဲ့အျပင္ သူတို႔ပိုင္ဆိုင္တဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကိုပါ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းခံရဖြယ္ ရွိေနတယ္ လို႔ လူမႈကြန္ယက္ တြင္ သတင္းေတြ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတာပါေနာ္။ ” ဘယ္လိုေတြေတာင္လဲဟယ္! ယုတ္မာလိုက္ၾကတာ..👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽သ႐ုပ္ေဆာင္ ခိုင္သင္းၾကည္ ….ခိုင္သင္းၾကည္၏ …. အမ်ိဳးသား …. ခန႔္ႏိုင္ ….ခိုင္သင္းၾကည္၏ ….သမီး ျဖစ္ သူ ….. စံထိပ္ထားဦး …..၎တို႔ ၃ ဦးသည္ …. CDM ျပဳလုပ္ရန္ ….လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း …. CRPH အားေထာက္ခံျခင္း ….ဆူပူ+အုံႂကြ+ မႈ မ်ားျဖ စ္ရန္ ….အ+ၾကမ္း+ဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ရန္ …. လႈံေဆာ္ျခင္း … ႏိုင္ငံေတာ္ ….
အႀကီးအကဲမ်ားအား …. ေစာ္ကား …..ပုတ္ခတ္ျခင္း ….. တို႔ေၾကာင့္ …..၎ တို႔ ၃ ဦးအား …. ဥပေဒအရ ….ထိေရာက္စြာ …. အေရးယူသြား မည္ …..ယင္းအျပင္ …. မိသားစုပိုင္ …. စီးပြားေရး … လုပ္ငန္းမ်ားအား ….ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္အျဖစ္ …. ခ်ိတ္ပိတ္ ….သိမ္းဆည္း …. သြားမည္ … . ” လို႔ Facebook ေပၚတြင္ ေရးသားတာျမင္ေတြ႕ေနရေပမယ့္ အတည္ျပဳလို႔ေတာ့ မရေသးပါဘူး ပရိသတ္ႀကီးေရ….
Previous post ဟာခနဲ့ ဖြစ်သွား လောက်အောင် ဆက်ဆီ ကျကျ ရိုက်ထား တဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ် ရဲ့ ဗီဒီယို အသစ်
Next post မရှိဆင်းရဲ တဲ့ သူတွေ အလွယ်တကူ ယူစားလို့ ရအောင် အိမ်ရှေ့ သစ်ပင်မှာ ထမင်း ဟင်းထုတ်များ ချိတ်ပေး ထားသော အခါ